Ministeerri Fayyaa fi Faawundeeshiniin Dibooraa guddina sammuu daa’immanirratti waliin hojjechuuf waliigalan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Ministeerri Fayyaa fi Faawundeeshiniin Dibooraa guddina sammuu daa’immanirratti waliin hojjechuuf waliigalan
On May 8, 2021 41
Finfinnee, Eebila 30, 2013 (FBC) – Ministeerri Fayyaa fi Faawundeeshiniin Dibooraa dhimma dhibee saalessa saammuu daa’immani irratti waliin hojjechuuf waligaltee mallatteessaniiru.
Ministirri Ministeera Fayyaa Dooktar Liyaa Taaddassaan Fayyaa hawaasa eeguuf hojii hedduun hojjetamaa jiraachuu fi dhimma fayyaa daa’immani irrattis dhaabbilee deeggartootaa waliin hojjetamaa jira jedhan.
Faawundeeshinii Dibooraa waliin hanqina guddina sammuu daa’immanirratti qindoominaan hojjechuuf waliigaluu ibsaniiru.
Ogeeyyii damee Fayyaaf leenjii ga’umsa qabu laachuu fi dhiyeessii galteewwaaniirratti waliin kan hojjetan ta’uu eeraniiru.
Faawundeeshiniin Dibooraa daa’immaan dhibee saalessa saammuu qaban irratti kan hojjetu ta’uu itti aanaa itti gaafatamaan dhaabbatichaa obbo Abbabaa Girmaan ibsaniiru.
Faawundeeshiniin Dibooraa fayyaa fi barnootaa daa’immanirratti xiyyeeffachuun kan hojjetu ta’uu eeraniiru.
Ministirri Ministeera Fayyaa Dooktar Liyaan hojii Faawundeeshiniin Dibooraa dhibee daa’immani saalessa saammuu qaban irratti hojjecha jiruu galateeffachuu isaanii ragaan Ministeera Fayyaarraa argame ni agarsiisa.
Oduu biyya keessaa7396